ငါတောင်ပိုင်းအဓိကကွင်းဆက်တိုင်းကြော်ကြက်သားကိုစား၏ - သတင်း
အမေရိကန်တောင်ပိုင်းကမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကြက်ကြော်ကကြော်တယ်။ ဤဒေသကို Kentucky Fried Chicken နှင့်နိုင်ငံတကာကြက်သားကွင်းဆက်များနှင့်တစ်ခါတစ်ရံအငြင်းပွားဖွယ် Chick-fil-A တို့ကြောင့်လူသိများသည်။
မူလကမစ်ရှီဂန်မှတောင်ပိုင်းတောင်သူလယ်သမားများဖြစ်သော grits (ironically) or tea ကဲ့သို့သောဘယ်သောအခါမျှမ ၀ င်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကြက်ကြော်ကြော်ကိုအမြဲကြိုက်ခဲ့သည်။ ငါ၏အတောင်ပိုင်းမြို့၏အဓိကဆွဲအမှိုက်သရိုက်အနည်းဆုံး 10 တောင်ပိုင်းအစားအစာအဆစ်ရှိပါတယ်သော်လည်း, ငါသူတို့ထဲကအတော်များများမပြဘူးသဘောပေါက်လာတယ်။
ငါအားကစားရုံအသစ်တစ်ခုနှင့်တွဲနေသည့်နွေရာသီ #bikinibody အစားအစာတွင်ရှိခဲ့ဖူးသော်လည်းလွန်ခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်၏အယ်ဒီတာနှင့်စကားပြောသောအခါကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည်ကာဗွန်နိမ့်ကျသောစားပွဲနှင့်အားကစားဘောင်းဘီအသစ်များမှတောက်ပခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏နွေရာသီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်နေစဉ်တောင်ပိုင်း (နှင့်ယူဆရသောအမေရိက) ရှိအကောင်းဆုံးအမြန်အစားအစာကြော်ကြက်သားကိုရှာရန်ရှာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်စားကြူးသောပျော်စရာဖြစ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံအလွန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည်။ တကယ့်ကိုဆိုးဝါးတဲ့အပြင်းအထန်တနေ့မှာနှစ်ခါအာဟာရရှိတဲ့အစာကိုစားတာ၊ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော့်ဘ ၀ ရဲ့နောက်ဆုံးအပတ်မှာဆိုဒါဆိုဒါပိုရခဲ့ဖူးတာကိုသတိပြုမိခြင်း၊ အနုပညာရှင်တွေလိုပဲအနုပညာအတွက်ငါစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့တယ်။ သို့မဟုတ်ဤကိစ္စတွင်တောင်ပိုင်းကြော်ကြက်သားကွင်းဆက်၏အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။
စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုစီတွင်ဂန္ထဝင်ကိုကျွန်ုပ်မှာထားခဲ့သည်၊ မှတ်စုများကိုသေချာဂရုတစိုက်စားသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အစားအစာ၏ Insta-worthy ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ခဲ့သည်။ ငါကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုစောငျ့ရှောကျဘူး။
နံပါတ် ၆– ကင်တပ်ကီကြက်ကြော်
အားလုံးကြည့်ရှုပါ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ဗိုလ်မှူးကြီး Sanders သူသည်ငါတို့သိကြ၏။ ဆိအဖြစ်, သူသည်သူအသက်ရှင်သေးရဲ့ကျိန်ဆိုနှင့်ကီ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ကန်။ KFC သည်တောင်ပိုင်းစားနပ်ရိက္ခာအကျယ်ပြန့်ဆုံးရောက်ရှိသည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဝမ်းနည်းစရာကကျနော့်အတွေ့အကြုံက Kentucky Fried Chicken နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်ကြီးစရာကောင်းတာကသူ့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပဲ။
ငါသည်ဤအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ကြောင့်မြင့်မားသောမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူဤမုန့်ညက်သို့သွားလေ၏။ ငါအလုပ်ချိန်ကိုအလုပ်ကနေထွက်လိုက်ပြီး၊ ငါဟာစစ်မှန်တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုစတင်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီ။ KFC ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလို့ထင်ရပြီးကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒေသတွင်းသို့ရောက်ရန်အသွားအလာများစွာကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့သည်။
အာလူးနဲ့အာလူးနှစ်ပြားခွဲပြီးထမင်းချက်ဖို့ကျွန်တော်မှာလိုက်တယ်။ ကြက်သားသည်ကျွန်ုပ်တစ်ပတ်တာကာလအတွင်းခံစားခဲ့ရသည့်အချောကျိူးဖြစ်ပြီးအချောထည်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့အစားအစာတွေကတော့တကယ့်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ အဆိုပါအတွေ့အကြုံကိုအထူးဘာမျှဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအိမ်ပြန်သွား။ , ငါ့အသင်း USA တွင်ဆွဲကြိုးချွတ်နှင့်သူမကီကီကနေမသည်ဝမ်းသာပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းငါ့ Alabamian အဘိုးရှည်လျားရှည်လျားသောစာကိုစလှေတျတျော။ ကျွန်တော့်ကိုအမေရိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အမြင်ပျက်သွားတယ်။
Bojangles ဟာငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာလည်ပတ်ခဲ့တဲ့အစားအစာကွင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်သိပ္ပံပညာအတွက်တော့မှန်ကန်တဲ့သုံးသပ်ချက်ရေးဖို့ဒီသီတင်းပတ်အနည်းဆုံးတစ်ခေါက်သွားခဲ့ရတယ်။ ၁၇ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများကဲ့သို့သောအခြေခံအားဖြင့်မည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုထောက်ခံသည့်ကျွန်ုပ်၏ညီကိုခေါ်လာခဲ့သည်။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသည် Cajun filet biscuits နှင့် Cajun fries များကိုမှာယူခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ကျောကိုကြည့်နေစဉ်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းမှရှောင်ရှားရန် NASCAR ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့မရခဲ့သနည်းဟုညစာနှင့်တိတ်ဆိတ်စွာစကားပြောခဲ့သည်။
အဘယ်သူသည် sidemen အိမ်တော်၌နေထိုင်သည်
Bojangles ကတောင်ပိုင်းလိုခံစားရတယ်။ ၎င်းသည်အတွင်းပိုင်းတွင်အဝါရောင်တောက်ပသည်။ အစားအစာ၏တင်ပြချက်သည်တရား ၀ င်ပုံရလောက်အောင်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းပြီးလက်ဖက်ရည်နှင့်ဘီစကွတ်မုန့်ကိုအထူးပြုသည်။ menu item တိုင်းတွင် Bo သို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းစာလုံးများပါ ၀ င်သည်။ တစ်ခါကငါ Bojangles ကိုသွားပြီးယောက်ျားတစ်ယောက်ကသူ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးကောင်ကိုယူလာခဲ့တယ်။ ငါ Bojangles ကဘာလဲဆိုတာငါတောင်တောင်အတွေ့အကြုံ။ သို့သော်အစားအစာသာမန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်ဖြစ်သည်။ ရိုးသားစွာပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကြက်ကြော်ကြော်ကိုပင်ကြည့်ပြီးပြီဖြစ်သည်။ Popeyes ကသူ့ကိုယ်သူ Louisiana မီးဖိုချောင်လို့ခေါ်ပြီးတောင်ပိုင်းအစားအစာဆိုင်တွေမှာထူးခြားတဲ့အရသာတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုစုစုပေါင်းအံ့သြစရာများကယူခဲ့ပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ် ဦး squit အောင်ဘယ်လို
ငါ Popeyes ကိုသွားတဲ့ခရီးကနည်းနည်းထူးဆန်းပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကအဆောက်အ ဦး ကိုပတ် ၀ န်းကျင်လေးပတ်လောက်ကားမောင်းပြီးဖွင့်မထားကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဲဒါက ... ဖြစ်တယ်။ ငါသာဖွင့်လှစ်ခဲ့မသိခဲ့ပါနှစ်ခုသာန်ထမ်းဒေသခံ hip-hop ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှနောက်ကျောကခုန်သောကြောင့်။ ငါမီးဖိုချောင်မှလာမယ့် Kanye West ရဲ့ကျော်ကြား၏တိတ်ဆိတ်အသံတွေကြားသောဒုတိယဤအရပ်ဌာန၌ရောင်းချခဲ့သည်။
သုံးပုလင်းကြက်သားထမင်းမုန့်ကိုငါမှာလိုက်တယ်။ အစားအစာကအရမ်းကောင်းမွန်တဲ့အအေးဓာတ်၊ ကောင်းမွန်စွာချက်ပြုတ်ထားတာပါ။ အသားဖျော်ရည်အစားငါကြက်သားရင်သားကိုတကယ်စားနေသလိုပဲ။ ဒါဟာသေးငယ်တဲ့အရာပါပဲ။
# 3: Zaxby ရဲ့
Zaxby ရဲ့မြို့ငယ်လေးရဲ့အမှတ်တရများနှင့်ကြက်သားတိတ်ခွေနှင့်အတူအိမ်ကဲ့သို့ခံစားရသည်။ နယူးယောက်မြို့မဟုတ်ပါ၊ ချစ်စရာကောင်းသောဂျော်ဂျီယာနေအိမ်ဖြစ်သည့်သင့်မိခင်များကသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူငါးမျှားရန်မသွားခင်သင့်ကိုကြက်ကြော်ကြော်ကိုစားစေသည်။
ငါ Zaxby's Chicken Finger Plate ကိုမှာလိုက်ပြီးငါတကယ်အလိုရှိသော်လည်းတစ်ခုလုံးကိုမပြီးနိုင်ဘူး။ ဒီအစားအစာဟာအိမ်လုပ်ပြီးငါဒီရက်သတ္တပတ်မှာငါစားမိခဲ့သမျှအစားအစာတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးအစားအစာပဲ။ ငါ Zaxby ရဲ့ထွက်ခွာသောအခါငါပင်အနည်းငယ်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာ? မုန့်တဖဲ့ကိုမုန့်ညက်တိုင်းနှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ငါတကယ်နားမလည်ကြဘူး။ သင်အသုပ်မှာယူရင်တောင်သင်ကပေါင်မုန့်တစ်ချောင်းရတယ်။ စားဖိုမှူးများသည်ပေါင်မုန့်မာဖီးယားဂိုဏ်းနှင့်ချုပ်နှောင်ထားခြင်းသို့မဟုတ်အထက်ပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှကာဗွန်များစွဲလမ်းနေခြင်းကိုသံသယရှိသည်။ အဆိပ်ကိုယူပါ။
# ၂: ကြက်ဖ - အေ
Chick-fil-A သည်တောင်ပိုင်းအစားအစာတွင်တွေ့ကြုံရဖွယ်ရှိသည်။ ၀ န်ထမ်းများကနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောတောင်ပိုင်းခေါင်းလောင်းများဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မြောက်ပိုင်းနဲ့နိုင်ငံတကာစာဖတ်သူတွေတောင်ပိုင်းလူနေမှုပုံစံဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထိုအစားအစာသည် Chick-fil-A အရသာကိုဖန်တီးရန်ထူးခြားသောနည်းဖြင့်ချက်ပြုတ်ထားသည်။ ကြက်သားသည်လတ်ဆတ်သည်။ Mor Mor Chikin ၏ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည်ပျော်ရွှင်စရာသာဖြစ်သည်။ ဒီစားသောက်ဆိုင်ဟာသူ့ရဲ့ခရစ်ယာန်တန်ဖိုးတွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဂုဏ်ပြုပြီးတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာပိတ်ထားတယ်၊ အဲဒါကငါသိတဲ့လူများစွာရဲ့လေးစားမှုကိုရရှိစေတယ်။
ငါတွေ့ဖူးသမျှနေရာတိုင်းမှာအရမ်းအလုပ်များလွန်းလို့ TRAFFIC DIRECTORS ရှိတဲ့အတွက် Chick-fil-A ဟာတစ်ခုခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ့ရဲ့ဒေသခံအဆစ်မှာကားရပ်နားရာနေရာကိုဖြတ်လျှောက်ရင်း ၁၅ မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရတယ်။ အဲဒီမှာဖော်ရွေတဲ့ချားလ်စ်တောင်မှလမ်းမှန်ကိုညွှန်ပြဖို့ငါသွားခဲ့တယ်။
ငါ 8- count က nugget မုန့်ညက်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ငါ့ကိုအစားအစာပေးတဲ့မိန်းမကငါ့ဆံပင်တွေနဲ့လက်သည်းတွေကိုဝါကျတစ်ကြောင်းနဲ့ချီးမွမ်းခဲ့တယ်။ အရုပ်ပဲ! Chick-fil-A အစားအစာအတွေ့အကြုံတိုင်းကဲ့သို့ပင်ဤသည်အလွန်ကောင်းသည်။ အနည်းငယ်နီသောကြက်သားသည်အဘယ်အရာကိုစွဲလမ်းစေသနည်းကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မရှင်းပြနိုင်ပါ။ ငါမှော်အတတ်ပြောပေမဲ့တစ်ခုခုကငါ့ကိုစုန်းအတတ်ကို Chick-fil-A အသိုင်းအဝိုင်းမှာလက်မခံဘူးလို့ပြောတယ်။
# 1: PDQ
ငါဒီစားသောက်ဆိုင်ကိုစမ်းကြည့်ဖို့ #bae ကိုယူလာခဲ့တယ်၊ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံး PDQ နဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချိန်းတွေ့တာကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဤသည်ကွင်းဆက်အမှန်တကယ်တောင်ပိုင်း၏လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြက်သားသည်အလတ်ဆတ်ဆုံးနှင့်ကျွန်ုပ်စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သောကွင်းဆက်များထဲမှအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဆိုပါကြော်တွေဟာဆားနဲ့ငရုတ်ကောင်းတို့နဲ့သာပြည့်နှက်နေပြီးငါ့ရဲ့တည်နေရာကတော့အရသာရှိတဲ့မာစတာလိုမင်းအချိုရည်ကိုမင်းရဲ့အရသာကိုထည့်နိုင်တဲ့အဲဒီဖန်စီဆိုဒါစက်တစ်လုံးရှိတယ်။
အဆိုပါန်ထမ်းပျော်မွေ့ခဲ့ကြ - မဟုတ်စက်ရုပ်လမ်းအတွက်ပေမယ့်ကိုယ့်ငါကောင်းတဲ့လူတစ် ဦး နှင့်ငါအမြန်အစားအစာမျိုးလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ စားသောက်ဆိုင်မှာ ၃ ချပ်အစာကျွေးခဲ့တယ်။ ညနေစာတစ်ပွဲအတွက်အစာလုံလောက်အောင်မဟုတ်ဘဲဒုတိယအကြိမ်စားခြင်းသည်အရင်ထက်ပင်ပိုကောင်းသည်။ ၁၀/၁၀ ။ $7အတွက်နှစ်အစားအစာ? အမြန်အစားအစာစားသောက်ဆိုင်ကလား ချီးမွမ်းကြလော့။
ဤရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, ငါအသိပညာအများကြီးနှင့် (အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်) အနည်းငယ်ပေါင်အနည်းငယ်ရရှိခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်းကြော်အစားအစာများသည်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်များပြီးကြင်နာတတ်သောလူများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်အလုပ်အဆင်ပြေသောအစားအစာနေရာများယူဆောင်လာရန်အတွက်ကျင်းပရမည့်ပွဲဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်တောင်ပိုင်း၏အကြီးမားဆုံးတင်ပို့မှုဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအစားအစာနှင့်လူကောင်းများ။